थाहा खबर: काठमाडाैं महानगरपालिकाले ल्याएको स्थानीय पाठ्यक्रममा के-के छन्?
काठमाडाैं महानगरपालिकाले ल्याएको स्थानीय पाठ्यक्रममा के-के छन्?
काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाले नेपाल भाषाको कक्षा १ देखि ८ सम्मको स्थानीय पाठ्यक्रम यसै शैक्षिक सत्रबाट कार्यान्वयनमा ल्याउने असोज २० गते निर्णय गरिसकेको छ। योसँगै यही शैक्षिक सत्रबाट विद्यार्थीले स्थानीय पाठ्यक्रम पढ्न पाउने भएका छन्।
महानगरपालिका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलका अनुसार स्थानीय पाठ्यक्रमभित्र काठमाडौंको इतिहास,चाडपर्व संस्कृतिलगायत समावेश गरिएको छ। ‘पाठ्यक्रममा कला, संस्कृतिलाई धेरै प्राथमिकता दिइएको छ,’उनले भने,‘पाठ्यक्रम नेपाल भाषामा अनुमोदन गरिएको छ।’ महानगरपालिकाले काठमाडौंको कला,संस्कृति संरक्षण गर्ने मूल उद्देश्यले स्थानीय पाठ्यक्रम ल्याइएको जानकारी दिए।
उनले भने, ‘हामी कला,संस्कृति,रहनसहनको धनी छौँ। तर, पछिल्ला पुस्ताले यसलाई बिर्सिँदै गइरहेका छन्। यस्ता ऐतिहासिक कला,संस्कृतिलाई सधैं जीवन्त राख्ने हाम्रो लक्ष्य हो।’
स्थानीय पाठ्यक्रमका संयोजक मोतीराज खनालले महानगरपालिका भित्रका निजी तथा सामुदायिक विद्यालयमा यसै सत्रबाट स्थानीय पाठ्यक्रमको पठनपाठन थालनी गर्ने बताए। उनी भन्छन्,‘काठमाडौंको परिचय र कलात्मक शैलीको सेरोफेरोलाई पुस्तकमा लिइएको छ। पुरातात्विक विषयलाई बढी जोड दिइएको छ।’
उनका अनुसार ८० पेजको पुस्तक बनाइएको छ। ‘पाठ्यपुस्तक तयार छ, ’उनले भने, ‘वितरणका लागि जनशक्ति तयार पार्दै छौँ। छिट्टै वितरण थाल्छौँ। यो पुस्तक पढ्ने विद्यार्थीले धेरै ज्ञान सिक्न पाउनेछन्।’
महानगरपालिकाले २०७६ भदौ महिनामा पाठ्यक्रम निर्माणका लागि नगर शिक्षा समितिले तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को वार्षिक बजेट पुस्तिकामै शिक्षा नीतिअन्तर्गत विद्यालय शिक्षामा स्थानीय पाठ्यक्रम बनाई सोही वर्ष जारी गर्ने उल्लेख गरेको थियो।
तर, सोही वर्ष महानगरले पुस्तक सञ्चालनमा ल्याउन सकेन। महानगरभित्र ९१ वटा सामुदायिक विद्यालय र करिब ५ सय ४३ निजी विद्यालयहरू सञ्चालित छन्।